Ngabe iMaze Runner 4 izoke Iphinde Ibuyele Esikrinini Esikhulu? - Ukuzijabulisa
Ngabe iMaze Runner 4 izoke Iphinde Ibuyele Esikrinini Esikhulu?
Lokhu Yinto Ongase Ungayazi Nge-Maze Runner
Ingabe Kuzoba Noma Iziphi Izinguquko Zokubuyiswa Kwe-Maze Runner 4?
Izokwenzeka Nini I-Premiere ye-Maze Runner 4?
Ubani Ozovela Ku-Maze Runner 4?
Yini Esingayilindela Esakhiweni Somgijimi We-Maze 4?
Ngokugxila okwandayo ekusetshenzisweni kwedijithali nolwazi lomsebenzisi, kube nokwanda kwenani lezincwadi eziguqulwa zibe uchungechunge. Akunjalo?? …. Ngiyakwazi lokhu!!!
Futhi uvumelana nathi ukuthi lezi zinganekwane nochungechunge ziyaphoqa, yingakho uze kusayithi lethu kwasekuqaleni. Ngoba badlulisa isakhiwo ngendlela emangalisa kangaka, enezici eziningi ezibonakalayo, kufanelekile ukubukela.
I-Maze Runner iyisibonelo se-trilogy yefilimu eqede ngempumelelo amasizini ayo amathathu, futhi sinayo phambi kwethu. Futhi manje uzofunda konke odinga ukukwazi mayelana nefilimu ye-Maze Runner 4, okuhlanganisa nokuthi izokhonjiswa nini okokuqala, ubani ozodlala kuyo, nakho konke okunye.
Ukuqala ngesiqeshana esifushane, esidonsa ukunaka esivela ku-Maze Runner-
Le ndaba yenganekwane yesayensi isuselwe kwethengiswa kakhulu kunazo zonke i-Maze Runner, ekunike inhlanganisela emangalisayo yesenzo nokuzidela. Ukukhiqizwa ku-trilogy kwenganyelwe ngu-Ellen Goldsmith-Vein, kuyilapho ukusatshalaliswa kuphathwa yi-20th Century Fox.
Sesivele sinamafilimu amathathu athole ukubuyekezwa okuhle okuvela emphakathini, nokuthi ukuthi isizini yesine isendleleni kuzonqunywa yithi ngokuhlanganyela...
Ngokungalindelekile, abalandeli abalandela le trilogy banciphisa ngawo wonke ama-series kodwa kunezizathu, uma kubhekwa ukuthi yibaphi abenzi abangaqhubeka ne-franchise kodwa uhlangothi olumnyama ukuthi kubukeka sengathi abakhiqizi abanalo intshisekelo enkulu yokuyinweba phambili.
Umqondisi weMaze Runner u-Wes Ball kanye nombhali wesikrini u-T.S. U-Nowlin uthe amathuba abo okuthi kwenzeke ifilimu yesine mancane kakhulu. Ngakho-ke, asikugcini okulindele kakhulu ku-movie njengoba amathuba okuxoxwe ngawo mayelana nokuvela kwayo engephezulu kakhulu.
Ngiyabona ukuthi lokhu kungase kuvele njengokubi, kodwa amathuba okuthi sibuye mancane kakhulu, noma, uma sikubeka ngenye indlela, amathuba okuthi isithombe sesine sivuselelwe mancane kakhulu.
Ukuze kucace, akukaze kube nesimemezelo esivela kunoma yibaphi abadali, ababonisi, noma amalungu abalingisi ukuthi i-Maze Runner 4 iyasebenza ngalesi sikhathi. Uma abenzi bamafilimu benza izinqumo zabo futhi baqhubekele phambili nayo, maningi amathuba okuthi izobuyela ezinkundleni zemidlalo yeshashalazi njenge-franchise, uma kunjalo, nokuthi izoba ngo-2022.
Ngenhlanhla, imithombo ethile engekho emthethweni ikhombisa ukuthi inoveli eyandulelayo ingasetshenziswa ukuze kunwetshwe isakhiwo futhi yenze ihehe kakhulu. Ngenxa yalokho, asinaso isiqiniseko sokuthi izokwamukelwa noma cha… Nokho, kufanele uzilungiselele.
Sizo, ngokungangabazeki, sikubuyekezele le ndawo ngokushesha nje lapho sithola noma yiluphi ulwazi oluthembekile ngedethi yokuqala yefilimu. Okwamanje, thola okwengeziwe mayelana nabalingisi be-Maze Runner 4.
Uma i-Maze Runner franchise ithola inoveli yangaphambili, maningi amathuba okuthi isitudiyo siveze ubuso obusha, okusho ukuthi abalingisi bokuqala, okuhlanganisa uDylan O'Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong. U-Lee, u-Dexter Darden, no-Patricia Clarkson, ngeke babuyele ochungechungeni.
Ngakho-ke, uma umbukiso ubuya, lungiselela ukubona ubuso obusha nethalente elisha esikrinini. Landela amawebhusayithi wabalingisi ukuze uhlale unolwazi ngazo zonke izindaba ezintsha nolwazi olumayelana nazo.
Ngenxa yokuthi kuwukujwayela kwemibhalo, indlela engcono kakhulu yokuthola ukuthi yini ezokwenzeka ngokulandelayo esakhiweni ukubheka izinkomba kumthombo wendaba. Akunjalo? Njengoba kuphawuliwe phambilini, womathathu amafilimu adlule abesekelwe kumanoveli, okuhlanganisa i-Maze Runner, i-Scorch Trials, kanye ne-Death Cure. Njengomphumela, i-The Kill Order noma i-The Fever Code kuzoba umthombo olandelayo ongaphenya. Ungaphinda ubuke uchungechunge olunezingxenye ezimbili zawo womabili lawa mafilimu.
Manje sekuyindaba nje yokulinda abadidiyeli noma amalungu abalingisi ukuthi akhulume ukuze athole ukuthi ngempela kwenzakalani. Nakuba ngiqonda ukuthi abaningi benu balangazelela ukulandisa okunembayo, ngingakutshela ukuthi akukho lutho olubalulekile olutholakala kunoma yimiphi imithombo egunyaziwe. Kodwa-ke, okwamanje, ungafunda kabanzi ngalesi sihloko ngokubheka imibuzo yethu evame ukubuzwa mayelana nalesi sihloko.
Lesi sihloko sihlinzeka ngokubheka okujulile kwe-Maze Runner 4 futhi ikwazisa ngakho konke ukuthuthukiswa kwakamuva kakhulu kwegeyimu. Kodwa-ke, ukuze uhlale unolwazi kuzo zonke intuthuko zesikhathi esizayo, okuhlanganisa noma ngabe umenzi wombukiso uzoyijwayela yini inoveli ye-prequel, sicela uvakashele iwebhusayithi yethu.
Ulwazi olungenhla yikho konke esingathanda ukwabelana nawe nawe mayelana ne-Maze Runner 4, okufanele ukuqaphele uma ungumlandeli wefilimu. Uma unemibuzo noma ukukhathazeka mayelana nalolu chungechunge nanoma yini enye, ngicela ungazise endaweni yokuphawula. Sikhona ukuze sikusize, ngakho sicela ungangabazi ukuxhumana nathi.
I-Belmont Stakes Isimemezele Amandla angama-50,000 Omcimbi wangomhla zili-11 kuJuni!
Ungawathola Kanjani Amayunithi Esitoreji Ashibhe Kakhulu Lapho Uhamba?